Translate ku in Somali with contextual examples
Results for ku translation from English to Somali
waan ku raba
waan ku jecllahay'
waan ku jecllahay '
Waan ku jecelahay qaali
Labo dhoof ku kala maqan.
the (-ku) dozen (masculine)
Ma ogatahay in DHL somaliland ay daafaha adiduunyada kaaga soo qaadi karto alaabtaada adgoo lacagatana halkan ku bixinyala, la xidhiidh
this medicine prevents blood clots.
As salaamu calaykum Ciid wanaagsan Walaalayaal waxa aan halkan idiin soo marinayaa salaan qiime badan oo ku aaddan debbaal-degga ciidal fidri. Ilaahey waxaan weydiisaneynaa camal san, cibaado la aqbalay, iyo caafimaad qab. Sannadka sannadkiisa ku gaadha bashbash, barwaaqo iyo badhaadhe. Aamiiin Abdilatif Osman Abby Sana'a, Yemen Expand Messages Author Sort by Date Salam As salaamu calaykum. Waa wada salaaman tihiin dhammaan saaxiibayaal. C/qaadir farriin baan u diray waxuuna ii sheegay in aanu weli helin invitation ka.... Abdilatif Osman latifabbey Jun 1, 2009 5:37 pm Re: Salam Wcws, Mahadsanid saxiib Cabdilatif. Cabdiqaadir waynu yar sugi. Kolay emails-ka xili uu eego ma waayi doono, sidaan filayo. Inshalah, wiigan soo socda ayeynu... Ahmed-Keyse A. Roble aroble2000 Jun 2, 2009 12:11 pm Salam As salaamu calaykum Waa salaamantihiin saaxiibayaal. Salaan ka dib, waxa aan ka codsan lahaa Abdirahman iyo Yusuf in ay inoo soo qoraan short description ay ku... Abdilatif Osman latifabbey Jun 21, 2009 8:58 am Re: Salam ... Salaam Dhamaantiinba. Walaalkay Abdilatif waa si wanagsan runtii waan qoslay oo gacmahayga oo aad ubuuxa ayaan albaab iskusii furay kkkk, walaal wahagaag... yusufster Jun 21, 2009 10:06 am Salam Salaan sare saaxiibayaal. Salaan ka dib, waan u mahadnaqayaa saaxiibaday C/raxmaan iyo Yuusuf. Waxay ila tahay oo aan labadeenaas saaxiib ku raacsanahay... Abdilatif Osman latifabbey Jun 29, 2009 10:42 am Salam Raalli ahaada waan idinka kala illaabay nuxurkii farriintayda hore. Waxa aan jeclahay in aan isla falanqeyno oo guda galno Ajandaha labaad ee ay tahay in aan... Abdilatif Osman latifabbey Jun 29, 2009 10:48 am Salam As salaamu calaykum waraxmatullaah. Walaalayaal waad mahadsantihiin. Insha Allah dalkii waxa aan ku gaadhi doonaa nabad-qab kolley arrimaha aan halkaa la tagi... Abdilatif Osman latifabbey Jul 7, 2009 4:47 pm Salam Â Salaan qiime badan baan idiinka soo dirayaa dalkii Hooyo saaxiibayaal. Salaan ka dib, aad baan u fiicanahay waanan nabad tagay, dalkii iyo dadkiina way... Abdilatif Osman latifabbey Jul 19, 2009 4:38 pm Re: Salam Mudane Cabdilatif, Sxb aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay salaantan aad nooga soo dirtay dalkii. Waxaan kuu rajeynaynaa wanaag badan. Waan isla socon doonaa,... Ahmed-Keyse A. Roble aroble2000 Jul 19, 2009 8:17 pm Salam As salaamu calaykum waraxmatulaah Salaan qiime badan baan halkan u soo marinayaa akhtaarta sharagta leh ee halkan ku kulanta, alxamdulilah waan fiicanahay... Abdilatif Osman latifabbey Sep 14, 2009 8:43 pm Re: Salam Wcs mudane Cabdilatif, Aad baad ugu mahadsan tahay salaanta iyo war la socodsiintaadaba. Sxb ma Sanca ayaad hada timid, khayr ayaan kuu rajeynaynaa. Maydin... Ahmed-Keyse A. Roble aroble2000 Sep 15, 2009 11:24 am Re: Salam Axmed, waad mahadsantahay walal. Haaheey Sanca ayaan imi oo aan joogaa. Â ________________________________ From: Ahmed-Keyse A. Roble Ahmed.roble@...> ... Abdilatif Osman latifabbey Sep 15, 2009 4:36 pm Salam Â As salaamu calaykum Â Ciid wanaagsan Â Walaalayaal waxa aan halkan idiin soo marinayaa salaan qiime badan oo ku aaddan debbaal-degga ciidal fidri. Ilaahey... Abdilatif Osman latifabbey Sep 20, 2009 2:43 pm Re: Salam Sc, Ciid wanaagsan asxaabta dhamaanteed. Illahay haynaga aqbalo ciibaadada. Mahadsanidin 2009/9/20 Abdilatif Osman latifabbey@...> ... -- Ahmed-Keyse A.... Ahmed-Keyse A. Roble aroble2000 Sep 20, 2009 2:48 pm Eid mubarak Eid mubarak , wa kulli caam wa antum bikheyr, ilaahay ha inaga aqbalo dhammaanteen soonkii,, aamiin. Â Â Eid mubarak , wa kulli caam wa antum bikheyr,...
pintu susah hendak dibuka dan ditutup (Malay>English)kamu punya hati ka (Indonesian>English)installationskontrakt (Swedish>English)sãƒâ©riques (French>English)taillé (French>English)lo opuesto de barato (Spanish>English)have sam and roy got a new bike (English>Russian)infinity and beyond (English>Croatian)запитка (Russian>English)vergognarmene (Italian>Thai)keep up the hustle (English>Russian)verdeeld (Afrikaans>French)kantutin kita (English>Tagalog)întrebărilor (Romanian>English)control ofof (English>Slovak)caractères de séparation, séparateurs (French>English)dead cat (English>Latvian)yo tambien corazon (Spanish>English)oftalmološkimi (Slovenian>English)համարձակւում (Armenian>Russian)tritium (English>Turkish)za (Slovak>English)korozivzdorné (Czech>German)kenapa kau tidak jawap soalan aku (Malay>English)ruf (French>English)